Voadika ny 17 Novambra 2018 6:45 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Septambra 2005)
Neila miresaka momba ny International Buttefly Rally (hazakazaka iraisampirenen'ny lolo) izay ho atao any Tonizia amin'ny 23 ka hatramin'ny 27 septambra 2005. Natao ho an'ny vehivavy ihany ity fifaninanana mitondra fiara ity. Hitondra fiara manerana ny firenena manomboka ao amin'ny làlana Habib Bourguiba amin'ny 23 Sept hihazo an'i Kairouan, avy eo Nefta, ary mifarana ao Kerkennah ireo vehivavy mpanamory fiara. lty ny tranonkala ofisialin'ny hetsika.
Chouchitou sy Marwen manoratra ny tapikilan'ny lalao amboara erantany hifanandrinan'i Toniziasy i Maraoka izay namidy antserasera ary tapitra tao anatin'ny ora vitsy. Mafy be ny tsindry ka simba ny lohamilin'ny tranonkala ary nipoaka ny tranokala. Antenaina fa hanamafy ny fitomboan'ny varotra antserasera ao Tonizia ny fanatanjahantena.
Miresaka mikasika ny fiderany ny asa tanana toniziana sy ny fahatsiarovany tao amin'ny atrikasa iray nanamboarana takelaka varahina ihany koa i Marwen.
Karim indray nahita sy nandinika fampiantranoana bilaogy maimaim-poana ao Maghreb izay natsangana vao haingana ary toa miasa amin'ny milina fibilaogina mifototra amin'ny php.
Nolazainy ihany koa fa nahare izy fa nisy tadio namakivaky ny tanànan'i Beni Khiar teo amin'ny morontsiraka atsinanan'i Tonizia.
Houssein mitatitra fa nahita bilaogy pelaka voalohany Toniziana (My Hell – Ny heloko).
Ahmed manoratra ny diany tany Etazonia, ao amin'ny fandaharan'asan'ny SALAM, ary ny fomba nanovàny ny fomba fijeriny ny firenena sy ny fahatsapany fa ny ampahany amin'ny kolontsaina amerikana dia niafina tao aminy tamin'ny alalan'ny sineman'i Hollywood.
Thysdrus manoratra momba ny Fulla doll, saribakoly iray hafa toy ny Barbie izay mivoaka avy ao anaty boaty mavokely mamiratra ary mitafy abaya mainty sy sarondoha mifanaraka amin'izany.
K-pax manoratra ny rikorikony amin'ny baolina kitra Toniziana (soccer) ka nitsahatra tsy handeha eny amin'ny kianja hijery ireo lalao. Nolazainy fa tsy afaka mandeha any amin'ny filaharana lavabe izy mba hilahatra tapakila, na koa filaharana lavabe hiditra ao amin'ny kianja mba hijery lalao iray izay toy ny hala-tahaka baolina kitra mahatsikaiky, mijery ny fahadisoan'ny mpitsara ary mety ho tohina.
Aleony ankehitriny mijery lalao lehibe ao an-trano mampahazo aina, na dia nanapa-kevitra ny hanatrika ny lalao roa farany alohan'ny handehanana any Canada aza izy.
Sami manambara fa izy sy ny ekipan'ny Escalier 7 no hanatevin-daharana ny ekipa mpampianatra ao amin'ny sampana ao Monastir.